Ebe 8 kachasị elu ịga leta na Croatia | Akụkọ Njem
Ebe 8 dị elu iji gaa na Croatia
Susana Garcia | | Croacia, Getaways Europe, General
Kroeshia bụ ala jupụtara n’iche, tinyere obodo ochie nke jupụtara n’akụkọ ihe mere eme na mpaghara ọgbara ọhụrụ na nke ugbu a, yana oke osimiri Mediterranean mara mma na oke ọhịa na ogige ntụrụndụ. Ọ bụ ya mere ọ ji bụrụ ebe na-adọrọ mmasị n’oge ezumike, ịghara ịkọwa na ọ dị ọnụ ala, yabụ enwere ọtụtụ ịga na Croatia.
Ọ bụ ezie na mgbe anyị chere echiche banyere ebe a anyị na-eche maka ụsọ osimiri ya, eziokwu bụ Croatia karịrị nke ahụ. Ọ bụ ya mere anyị ga-eji gwa gị gbasara ha Ebe kachasi elu nke Kroeshia agaghi-efu gi. Ọ bụrụ na anyị gaa nleta Croatia ọ dịkarịa ala, anyị ga-ejide n'aka ịhụ ihe ndị na-eme mgbanwe na ebe ndị ọzọ.
1 1-Plitvice Ọdọ
2 2-Obodo Dubrovnik
3 3-Osimiri Stiniva
4 4-Obodo Pula
5 5-Agwaetiti Mljet
6 6-Obodo akụkọ ihe mere eme nke Primosten
7 7-Osimiri dị na Zlatni oke oke
8 8-Ọdọ mmiri dị n’etiti mmiri mmiri nke Krka National Park
El Ogige Nature Park Plitvice O doro anya na ọ bụ ebe pụrụ iche. Nature n'ụdị ya dị ọcha maka ndị hụrụ njem mmụta n'anya. Ha nọ na mpaghara Lika, n'ime ime obodo ahụ. Enwere ike ịme ụzọ asatọ dị iche iche na ọdọ mmiri ndị a, na tiketi na-agụnyekarị njegharị na ụgbọ oloko ndị njem na njem ụgbọ mmiri na ọdọ mmiri kachasị ukwuu. Mana nke kachasị mma bụ ịgagharị n'okporo ụzọ ya, ụzọ ndị dị n'etiti ga-ewe awa anọ. Anyị ga-enwe ike ịchọpụta ọdọ mmiri ndị a na-amaghị nwoke na nsụda mmiri mgbe ụfọdụ.
Obodo Dubrovnik bụ taa otu n’ime ochie set nke kachasị mma na Europe, obodo nke echekwara nke ọma na oge, yana mgbidi ya na obodo ochie ya. Enwere ọtụtụ ihe ị ga-ahụ n’obodo ahụ, dị ka ọdụ ụgbọ mmiri ochie ya, nke ogige San Juan na-echebe.
Mgbidi ya bụkwa oké njem nleta mma, na Ikpo na Ploce ibo ụzọ dị ka ịnweta, na ije gburugburu mgbidi nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilomita abụọ. Ingbanye obodo ochie ya dị ka ịlaghachi azụ n'oge.
Ọ bụrụ n’ị na-achọ ụsọ osimiri zoro ezo, Stiniva bụ otu n’ime ha, a ezi paradise maka owu ndị hụrụ ịchọta nkuku pụrụ iche. Osimiri a zoro ezo n'etiti nkume, n'àgwàetiti Vis. Zọ nke ahịhịa ndụ siri ike, yabụ nhọrọ kachasị mfe bụ iji ụgbọ mmiri. Nke a bụ obere okwute maka ekele maka ọdịdị ala ya na ịdị jụụ ya. Nkuku nke kwesiri ka ichota.
Obodo Pula dị na mpaghara Istria, ọ dịkwa obere mana ọ na-enwe ọmarịcha ọnọdụ n'ụsọ Oké Osimiri Adriatic yana ihu igwe dị mma. Ọ bụrụ na ịchọrọ mgbe ị rutere na ị nọ na Rom na mberede, ya ejula gị anya, ebe ọ bụ na obodo a nwere nnukwu ihe nketa ndị Rom, echekwarala ya Pula egwuregwu amọ egwuregwu, nke bụ nke isii kacha ibu n’ụwa. Ihe ọzọ ị ga-ahụ n’obodo a bụ Arch nke Sergios, njiko mmeri na ogidi ndị Kọrịnt nke echekwara nke ọma.
Islandfọdụ agwaetiti a dị kilomita iri atọ na asaa n’ogologo na kilomita atọ n’ogologo ebe mara mma na obodo nta ndi mmadu noo na-enwe obi uto otu ndi mmadu si anabata ndi mmadu. Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ otu n'ime ebe kachasị mma na Croatia iji zuru ike ma zuru ike site na ndakpu mmiri, ịkụ azụ, ịgagharị ma ọ bụ naanị igwu mmiri.
6-Obodo akụkọ ihe mere eme nke Primosten
Obodo a nke akụkọ ihe mere eme dị ọkara okporo ụzọ dị n’etiti Sibenik na Split. Na gburugburu anyị na-ahụ ọtụtụ ọnụ mmiri, ụsọ mmiri na coves iji nwee ọmarịcha ihe dị oké ọnụ ahịa nke Mediterenian, mmiri doro anya na mmiri ọkụ. Ma obodo ya, emi odude ke peninshula, kwesịrị a jụụ nleta, na-achọpụta ya ochie n'okporo ámá na ochie center.
7-Osimiri dị na Zlatni oke oke
Ọ bụrụ na ị masịrị osimiri dị iche iche zoro ezo nke Stiniva, n'ezie ị ga-ahụ osimiri Zlatni oke na-atọ ụtọ. Site na aha obere ihe isi ike, anyị ga-echeta ya na enweghị mgbagha n'ihi ya peculiar kapịrị ọnụ udi. Ọ bụ ọdịdị nke ị na-agaghị ahụ n'ụsọ osimiri ọzọ, yabụ foto ndị a ga-abụ ihe doro anya. Ọ bụ ezie na ọ bụghị oke osimiri dị oke obosara, ọ na-ejupụta ebe niile, yabụ ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnụ ụtọ ya, ọ ka mma ịbịa n'oge, ma ọ bụ n'oge dị ala. Na mgbakwunye n'ụdị ya pụrụ iche, nke ha na-ekwu na-agbanwe mgbe niile, ọ na-enye anyị ahịhịa magburu onwe anyị izere anyanwụ na mmiri turquoise dị mma maka igwu mmiri.
8-Ọdọ mmiri dị n’etiti mmiri mmiri nke Krka National Park
Ọ bụrụ na Osimiri Plitvice hapụ gị ikwu okwu, ị nwekwara ike ịga ileta ọmarịcha Krka Nature Park dị na etiti Dalmatia mpaghara. A na-enweta mpaghara a site na ụgbọ mmiri a na-ewere na Obodo Skradin. Ọ bụ ezie na ọdọ mmiri Plitvice ahụ pụrụ iche ma nwee nnukwu aha, eziokwu bụ na n'ime ogige a anyị nwere otu uru, nke ahụ bụkwa na ọ bụ naanị ya ebe ha na-ekwe ka ịsa ahụ, ọ bụ ezie na ọ bụ naanị na mpaghara ikpeazụ nsụda mmiri. Ọ ga-abụ ahụmịhe pụrụ iche ịsa ahụ na ọdọ mmiri ndị dị otú ahụ na-ekiri nnukwu mmiri mmiri.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ebe 8 dị elu iji gaa na Croatia
Bọchị atọ m nọ na Osaka, na-eduzi etu esi aga ebe ahụ na ihe ị ga-eleta
Ebe asaa dị mkpa na San Isidro